ချက်ချင်းလက်ငင်းတရုတ်ပြည်ရောက်သွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ချက်ချင်းလက်ငင်းတရုတ်ပြည်ရောက်သွားခြင်း
Posted by eros on Nov 26, 2010 in Computers & Technology |7comments
ကျွန်ုပ်သည်ကား မြန်မာပြည်၌နေထိုင်သော အမျိုးကောင်းသား တဦးဖြစ်ပေသည်။ တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ မေးလ်းအား စစ်ကြည့်နေစဉ် ကျွန်ုပ်၏ အိုင်ပီလိပ်စာ (IP adress) အားကြည့်ရှုစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် မျက်လုံးပြူးသွားလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ် ၏ အိုင်ပီ လိပ်စာသည်ကား တရုတ်ပြည်ဖြစ်ကြောင့်ပေတည်း။ ထိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်သည်ကား visa, passport, transportation မပါပဲနှင့် တရုတ်ပြည် သို့ရောက်ရှိသွားလေသည်။ သိရှိသူများ ဆွေးနွေးကြပါကုန်။
it is great u come along wth china!
U use chinese server host….may be…………….bec of myanmar net work from…………..f.a.t
ကိုယ့်IP ကိုယ်ပြန်မြင်ရတာ လန့်တောင်သွားတယ်။
မြန်မာမှမဟုတ်.. အမေရိကကဝက်ဘ်ဆိုက်တွေပါ ဖြစ်နေတာလို့ သတင်းမှာ တင်ထားပြီးပါတယ်..။
တရုတ်ကြီးက မြန်မာအစိုးရကို သေသေချာချာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ယူဆမိကြောင်းပါ..။
It was not immediately clear whether the incident was deliberate, but the April 8 redirection could have enabled malicious activities and potentially caused an unintended “diversion of data” from many U.S. government, military and commercial websites, the U.S.-China Economic and Security Review Commission states ina316-page report to Congress.
Read more: http://www.foxnews.com/politics/2010/11/16/internet-traffic-reportedly-routed-chinese-servers/#ixzz16Nbhfu3t
မင်္ဂလာပါ eros ရေ
ကိုယ်ပိုင် ဆာဗာ မရှိ၍သော်၎င်း
မြန်မာ ပြည်ကို တရုတ်ပြည် လက်အောက်ခံပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
အစိုးရဘွန်းတွေတရုတ်ဝယ်တော့ … ယူအက်စ်အစိုးရအကြွေးရှင်က တရုတ်ဖြစ်နေတာ…။
လူသန်း၁ထောင်ကျော်က အမှန်အကန်အလုပ်လုပ်လာတော့ … ကမ္ဘာ့သုံးကုန်တွေအကုန် တရုတ်ပစ္စည်းဖြစ်ကုန်တာမဆန်းဘူး..။
ချမ်းသာလာတော့ … တရုတ်အိုင်ဒီယာတွေယူကြတာမဆန်းဘူး..။
ငွေရှိတော့ .. သယံဇာတတွေဝယ်နိုင်တာမဆန်းဘူး..။
ဆန်းတာက .. နံပါတ်၁ ရန်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ..နိုင်ငံကို ..နံပါတ်၁ မိတ်ဆွေသတ်မှတ်လိုက်တာက ..ဆန်းတာ..။
စဉ်းစားမိတာ.. တရုတ်က တော်တော် လုပ်နိုင်တာဘဲ။ စီးပွားရေးလည်း သူခြိမ်းခြောက်လောက်အောင် ကြီးထွားလာတယ်။ စစ်ရေးလည်း သူမျက်နှာ ကြည့်ရတယ်။ တရုတ် တရုတ်.. တော်တော်.. ဉာဏ်ပြေးတာဘဲလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး။